Plastic nwekwara, Plastic Optical Brightener, Plastic UV Avorber - ejikere ịlọ ụwa
Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd. hiwere na 2018, bụ ọkachamara soplaya nke polima nwekwara na China, ụlọ ọrụ dị na Nanjing, Jiangsu ógbè.
Ngwaahịa na-ekpuchi Optical Brightener, UV Absorber, Light Stabilizer, Antioxidant, Nucleating Agent, Intermediate na ndị ọzọ pụrụ iche nwekwara. Ngwa na-ekpuchi: plastik, mkpuchi, agba, ink, roba, kọmputa wdg.
AKWECKWỌ ND SP ỌREC
AKBR insist siri ọnwụ na “njikwa ezi okwukwe. Ogo nke mbụ, ndị ahịa kachasị elu ”dịka iwu bụ isi, na-ewusi nrụrụ onwe onye ike. Anyị R & D ọhụrụ ngwaahịa site na-ekwenyere University, idebe mma ngwaahịa mma na ọrụ. Na upgrading na ukpụhọde nke anụ ụlọ n'ichepụta ụlọ ọrụ, anyị ụlọ ọrụ na-enye keukwu ize ọrụ maka esenidụt mmepe na mergers na mbụ nke anụ ụlọ elu-edu ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, anyị na-ebubata ihe mgbakwunye kemịkal na akụrụngwa na mba ofesi na-egbo mkpa nke ahịa ụlọ.
ÌH ST STILIL STZER
AKWECKWỌ NDEC ỌR SP
Isi nke Plastic Modification Industry
Isi nke Plastic Modification Industry Echiche na njirimara nke plastic Engineering plastics and general plastics ...
Ngwa ngwa nke o-phenylphenol
O-phenylphenol O-phenylphenol (OPP) bụ ngwa dị mkpa nke ezigbo kemịkalụ kemịkalụ na ihe ndị dị ndụ. Ọ na ọtụtụ-eji ubi nke nwoke ịga ụlọ ọgwụ, mgbochi corrosion, obibi akwụkwọ na dyeing auxil ...
Antiseptic na fungicide maka mkpuchi
Antiseptik na fungicide maka coatings Coatings gụnyere ink, filler, agba mado, emulsion na resin, thickener, dispersant, defoamer, leveling n'ụlọnga, film-akpụ nnyemaaka, wdg ndị a ngwaọrụ nwere mmiri na nutrie ...